Waan ka xumahay Microsoft, waxaan u maleynayaa inaan ursanayo Jiir! | Martech Zone
Waan ka xumahay Microsoft, waxaan u maleynayaa inaan ursanayo Jiir!
Jimcaha, Agoosto 18, 2006 Jimco, Oktoobar 26, 2018 Douglas Karr
Markii aan hawlgal toos ah ugu dirayay wargeys, istiraatiijiyaddeennu waxay ahayd mid fudud oo waxtar badan. Waxaan ku xoojin karnaa xayeysiiyeyaasheena adeegsiga barnaamijkeena boostada tooska ah iyadoo la siinayo qiimo dhimis guud ahaan xayeysiisyadooda. Waxaan haysanay barnaamij boostada tooska ah oo tayo leh, laakiin qiimaheena aad ayuu u sarreeyay marka loo eego tartan kasta. Istaraatiijiyaddu aad ayey u guuleysatay oo waxaan si isdaba joog ah ganacsiga uga qaadnay tartankeenna… in kasta oo xayeysiiyeyaashu ay bixiyeen wax badan.
Gudaha, tani waxay ahayd istiraatiijiyad dib-u-eegis ah oo naga duwaneyd tartankeenna. Waxa na kala geeyay waxay ahayd inaan horeyba xiriir ula la yeelanay xayeysiiyayaashan, waxaan si fudud ugu baahanahay inaan ka faa'iideysano. Waan hubaa banaanka inaan fiirinayo, dadku waxay moodeen inaan xumaan nahay. Laakiin waxay ahayd ganacsi. Kama aanan xumaanin sababta oo ah waxaan u maleynayaa in waxtarka barnaamijkeenu uu aad uga badan yahay mid ka mid ah barnaamijyada tartamayaashayada. Waxaan sameynay falanqeyn bilaash ah, waxaan ilaalinay xog ururinno fantastik ah, waxaan maareynay liisaskooda Ha u dirin, iwm.
Blog Reaction beta wuxuu hayaa macluumaad kooban oo ku saabsan Microsoft Internet Explorer 7 iyo natiijooyinka baaritaanka u hoggaansamida heerarka CSS (Cascading Style Sheet). Natiijooyinka waa kuwo xun. Microsoft runti waa laga yaabaa inay dhanka kale u socoto marka loo eego heerarka internet-ka, oo aan horay loo sii wadin. Tani ma noqon karto heshiis weyn dadka isticmaala, laakiin waa xaalad aad u xun shirkadaha horumarka. Haddii farqiga u sii ballaadho sida daalacayaashu ula dhaqmaan heerarka, qiimaha taas waxaa lagu riixayaa shirkadaha qaybinaya barnaamijyada websaydhka. Waa inay ku taageeraan barnaamijyada madaxbannaan koodh aad u adag, iyo suurtagal ahaan qaabab badan oo ku saleysan nidaam kasta. Ugh. Wareegyo horumarineed oo dheeri ah, cilado badan, cabashooyin badan, iwm, iwm.
Markaa… haddii aad Microsoft tahay oo aad xumaan ku dhacday, maxay istiraatiijiyaddaadu noqon lahayd haddii aad rabto inaad soo saarto wax soo saar heerkiisu hooseeyo? Waxaa laga yaabaa inaad u qaybin lahayd si kasta. Kawaran haddii dadku aysan rabin? Hagaag… hada waxaad haysataa qofkasta oo adeegsanaya Cusboonaysiinta otomaatiga ah, si fudud ugu cusbooneysii casriyeynta Internet Explorer 7 sida a muhiim ah cusboonaysiin. Dhibaatada la xalliyey ado qaadashada tirada badan ee ikhtiyaariga ah ee shey heer-hoose ah iyada oo loo marayo xoog caayaan.
Waxa xun ayaa ah inaan ahay taageere Microsoft, ma ihi a Microsoft waa Xun nin. Laakiin waxaan u malaynayaa in aan jiir urinayo. Dareenkayga ku aaddan Microsoft ayaa laga yaabaa inuu is beddelo goor dhow.
Soo dejiso Firefox, dadweynow. Tani waxay noqon doontaa dagaal.
Tags: internet Explorerkorsashada weynMicrosoft